MP4 Tag Editor: Si fudud Edit MP4 metadata for Windows / Mac
> Resource > Video > Sida loo Edit metadata MP4 for Windows / Mac (Yosemite ka mid ah)
Haddii aad rabtid in aad akhrido macluumaad ah ee file ah, waxaad xaq u riixi kartaa waa, doortaan hantida, faahfaahinta la xusho. Si kastaba ha ahaatee, warbixinta waxaa lagu ma saxar karo. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad wax ka bedel metadata aad movie MP4, sida jilayaasha, agaasimayaasha, tag, ama sharaxa. Sida loo edit metadata MP4? Nasiib wanaag waxaan helay ah editor tag MP4 sare aad u.
Wondershare Video Converter Ultimate ( Video Converter Ultimate for Mac ) waa editor metadata MP4 ugu fiican. Waxaad u isticmaali kartaa si fudud xaalkaa metadata u MP4. Tani editor metadata MP4 maaraysa videos xawaare ka 30X dhaqso aan khasaaro tayada wax. Xaaladdan oo kale, waxaad daawan videos tayo sare leh oo ku saabsan qalab Apple isla markiiba. Ka sokow, waa Converter oo dhan-in-mid video ah. Waxaa loogu badalo karaa videos, download videos iyo gubi DVD. Waxaad u bedeli karaan videos ka mid ah qaab si macruufka qalab, aalad Android, iyo iwm Just download u leeyihiin isku day ah.
Sida loo Edit metadata MP4
Si DEAD filimada MP4, akhriyaan oo kaliya tallaabooyinka hoose. Wondershare Video Converter Ultimate Ayaa interface ah oo si qurux badan loogu tala galay, waa in aad qaadataa wax dadaal ah si ay u bartaan.
1 Upload files in this MP4 tag editor
Waxaad awoodi kartaa jiididda fudud iyo hoos u file MP4 codsigan. Ama waxaad riixi kartaa "Add files" dhexe ee interface si ay u dajiyaan aad gudbiso. Tan iyo software this taageertaa diinta Dufcaddii mana jirto wax xad size file max, aad dajiyaan karaa badan videos dheeraad ah si ay u.
2 qalab Set macruufka sida qaab wax soo saarka
Fadlan riix badhanka arrow hoos "Qaabka Output". Dooro "Device" → dooro "Apple" → doorato qalabka tufaaxa, sida iPhone, iPad sida qaab wax soo saarka. Sidoo kale waxaad dooran kartaa "Qaabka" iyo dooran M4V sida qaab wax soo saarka aad.
3 shakhsiyeeyo MP4 videos (Ikhtiyaar)
Haddii aad rabto in aad movie MP4 kaamil ah, kaliya aad u riixi kartaa "Edit" on video ah laga keeno si ay arbushin ilaa suuqa kala video tafatir ah. Tani editor tag MP4 kuu ogolaanaysaa inaad shakhsiyeeyo videos by falinjeeerka, la qabsado, isagoo intaa ku daray saamayn, watermark iyo Cinwaan. Just guji icon ku saabsan xaq u sareeya ee suuqa kala video tafatir ah. Ka dib markii tafatirka, fadlan guji "OK" oo u badbaadin doonaa.
4 Edit metadata MP4
Riix icon this video on keeno si ay arbushin ilaa metadata ka sixiddiisa daaqadaha. Dooro video nooca, nooca magacaaga video, ay doortaan afka doorbidayso, ka dibna riix "baadh" in lagu daro metadata si aad video.
Haddii file MP4 aad keeno waa filim ama TV show ah, taas editor metadata MP4 eegi doonaa wixii macluumaad ah ee metadata aad videos si toos ah. Haddii aan, waxaad kaliya DEAD kartaa file MP4 aad kaliya iskaa. Sidoo kale metadata MP4 la saxar karo. Waxaad kaliya ku qor karaa wax aad rabto in sanduuqa u dhigma.
5 Play MP4 video qalabka macruufka
Kadib markii geedi socodka metadata tafatir ah, fadlan riix "Beddelaan". Your video badaley la synced doonaa in Lugood si toos ah. Taas ka dib, waxaad ka heli doontaa videos si fiican u abaabulan. Ciyaaro videos on qalab macruufka noqon doono inta badan ka sahlan.
Top 39 Videos Funny canabka ma aha inaad Miss